Horse စကားလုံးပါသည့် စီးပွားရေးသုံး အီဒီယမ် (၁၀) မျိုး - Myanmar Network
Horse စကားလုံးပါသည့် စီးပွားရေးသုံး အီဒီယမ် (၁၀) မျိုး
Posted by Soe Soe Win on February 25, 2016 at 11:46 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တနင်္ဂနွေနေ့တစ်မနက်လုံး ကျွန်တော် အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်နေခဲ့တာ၊ နေ့လည်စာစားချိန်ကျ အရမ်းကိုဗိုက်ဆာနေပြီ။ တကယ့်ကိုဗိုက်ဆာလွန်းနေလို့ မြင်းတစ်ကောင်လုံးတောင် စားမယ်ဆိုစားပစ်လိုက်နိုင်တယ် (eatahorse-အလွန်အမင်းဗိုက်ဆာသောကြောင့်ရယ်စရာအဖြစ်သုံးသောစကား)။
ဗြိတိန်လူမျိုးတွေဟာ တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ ခွေးပြီးရင် မြင်းတွေကိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့သဘောကျတဲ့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အီဒီယမ်တွေ အများကြီးရှိနေတာဟာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အီဒီယမ်တွေကို အဓိကဖော်ပြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
၁။ A dark horse (British) - တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို မဖေါ်ပြတတ်ဘဲ တခြားလူတွေက သတိထားမိချိန်ကျမှ အံ့သြမင်တက်စေတတ်သူ
Jane isadark horse, isn't she? All these months we though she was quietly working in the back office when in actual fact she was writingabestselling novel.
Jane ကတကယ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတော်သူပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလတွေမှာ သူမကို ရုံးနောက်ခန်းမှာ ငြိမ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတယ်ထင်တာ၊ တကယ်တော့ သူမက အရောင်းရဆုံးစာအုပ် တစ်အုပ်ကိုရေးနေတာပဲ။
၂။ Closing the stable door after the horse has bolted (escaped) - ပြောင်းလဲလို့မရတော့သည့် ဆိုးဝါးသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ ရပ်တန့်အောင် ကြိုးစားမိခြင်း (သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ)
Introducing tighter security measure after the break in seems to me like closing the stable door after the horse has bolted.
ဖောက်ထွင်းမှု ဖြစ်ပြီးမှ ပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့ လုံခြုံရေးအစီအမံတွေ အသစ်ချနေတာဟာ (ကျွန်တော့်အတွက်တော့) သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထလုပ်နေကြတာထင်တာပဲ။
၃။ To driveacoach and horses through something - ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုတခုခုတွင် အားနည်းချက်နှင့် ကွာဟချက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ချပြခြင်း
The CFO droveacoach and horses through the company's plans for expansion.
ကုမ္ပဏီရဲ့ တိုးချဲ့မယ့် အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အားနည်းချက်တွေ အကြီးအကျယ်ရှိနေတာကို ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်က ထိထိရောက်ရောက် ထောက်ပြခဲ့တယ်။
၄။ To beat (also to flog)adead horse - အကျိုးမရှိသော၊ မအောင်မြင်သော အလုပ်တစ်ခုကို ထပ်လုပ်ရင်းအချိန်ဖြုန်းခြင်း
Do you think it's worth me writing toafew more recruitment agencies, or am I just beatingadead horse?
အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေပေးတဲ့ အေဂျင်စီတွေဆီကို ထပ်ပြီးစာရေးရင် ကျနော့်အတွက် အကျိုးရှိမယ် ခင်ဗျားထင်လားဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် အချည်းနှီး အချိန်ဖြုန်းသလိုများ ဖြစ်နေမလား။
၅။ To get off your high horse - တခြားလူတွေထက် ပိုကောင်း၊ ပိုတော်နေဟန် စိတ်ကြီးဝင် သရုပ်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်ခြင်း
If you would get off your high horse for one minute and listen to your colleagues, you would find that they have some great idea for this project.
မင်းသာ သိပ်သိ သိပ်တတ်နေဟန် စိတ်ကြီးဝင်နေတာတွေကို တစ်မိနစ်လောက်ရပ်ပြီး မင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ပြောတာကိုနားထောင်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီစီမံကိန်းအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ ရလာနိုင်တာကို မင်းတွေ့ရမယ်။
၆။ Don't put the cart before the horse (proverb) - (နွားရှေ့ထွန်ကျူး စကားပုံနဲ့ နီးစပ်) အလုပ်တွေကိုရှေ့နောက် အစီအစဉ်မကျ အလောတကြီး ကျော်လုပ်တတ်ခြင်း (စိတ်ရှည်သည်းခံမှုမရှိခြင်း သဘောဆောင်တဲ့ ပြယုဂ်)
There's no point trying to write the report when you haven't gotaclear idea of what to write. You don't want to put the cart before the horse.
ဒီအစီရင်ခံစာကိုရေးတဲ့နေရာမှာ ဘာရေးရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘဲရေးဖို့ ကြိုးစားရင် အကျိုးမရှိဘူး။ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို အစီစဉ်တကျ လုပ်စမ်းပါကွာ၊ လောမကြီးစမ်းပါနဲ့။
၇။ To lookagift horse in the mouth (usually withanegative) - (အလကားရတဲ့ နွားသွားဖြဲကြည့် မြန်မာစကားနဲ့ နီးစပ်) လက်ဆောင်အနေနဲ့၊ အခွင့်အရေးအနေနဲ့ တခုခုရပါလျက်နဲ့ ကျေးဇူးမတင်လျစ်လျူရှု ငြင်းတတ်ခြင်း (အငြင်းဝါကျအနေနဲ့ အမြဲလိုလိုတွဲသုံး)
I wouldn't lookagift horse in the mouth. I would accept that promotion.
အလကားရတဲ့နွားတော့ သွားပြီးသွားဖြဲကြည့်မနေဘူးဟေ့ (အခွင့်အရေးရပါလျက်နဲ့ ကျေးဇူးမသိမယူဘဲတော့ မနေဘူးဟေ့)၊ ငါဆိုရင်တော့ ရာထူးတိုးတာကိုတော့ လက်ခံမှာပဲ။
၈။ Horses for courses - အလုပ်တခုခုအောင်မြင်ပြီးမြောက် လုပ်နိုင်ဖို့ရာသင့်လျော်တဲ့ ကျွမ်းးကျင်မှုရှိသူ၊ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းပြောချင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒီစကားစုကိုသုံးပါတယ်။
Ah..well, it's horses for courses. Just because he is an IT expert doesn't mean that his is an expert in everything to do with computers.
လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူကို လူမှန်နေရာမှန် ရွေးချယ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သူက ကွန်ပျူတာနဲ့ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူဆိုပေမဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တာ အားလုံးကျွမ်းကျင်နေသူလို့တော့ ပြောလို့မရဘူးလေ။
၉။ To get it straight from the horse's mouth - မူလသတင်းအရင်းအမြစ်ကနေ သတင်းအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ရယူခြင်း
Where did you hear about the takeover?
၁၀။ To back the wrong horse - ရှုံးမယ့်မြင်းကို ကြေးထပ်လောင်းမိသလို။ အဆုံးသတ် အောင်မြင်မှု၊ အနိုင်ရရှိမှု မရနိုင်သော လူတစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုကို ထောက်ပံ့အားပေးမိခြင်း
Oh well, I guess we should have known that this marketing campaign wouldn't work. We just back the wrong horse this time.
အင်း.. အရောင်းမြှင်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်ကအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါတို့ သိသင့်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ငါတို့ ရှုံးမယ့်မြင်းကို ကြေးကြီးပေးလောင်းခဲ့မိသလိုပါပဲကွာ။
Englishwithatwist.com မှ Shanthi ရဲ့ 10 Business Idioms Using Horses ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Aung Aung Myint Oo on February 25, 2016 at 14:39
Permalink Reply by htaylim on February 26, 2016 at 8:36
Permalink Reply by Paing Paing on February 28, 2016 at 22:56
Thanks . U are so sweey.
Permalink Reply by daw khin seinoo on March 26, 2016 at 10:09
valuable knowledge for me